Ukuhamba: Ukuhlala Kunye Neendawo Zokuphupha | December 2021
Iindawo ezili-10 eziphambili zeedolophu ezintle, iidolophana kunye nezixeko zaseNgilani - Iindawo ezigqibeleleyo zokuya eNgilani
IBath eSomerset ibizwa njengeyona ndawo ifanelekileyo e-England. Ukuqhayisa ngelifa, imbali kunye neendawo ezisemaphandleni ezibalaseleyo, iNgilani likhaya kwezinye zeendawo ezintle zehlabathi. Jonga i-10 ephezulu apha kwaye ungeze oku kuluhlu lwakho lwamabhakethi.
Ii-Airbnb Cotswolds: I-12 yeyona ndlu intle, iLodge ne-Cabin Airbnb
Ii-Airbnb ezilungileyo kwiCotswolds, ukusuka eGloucestershire ukuya eOxfordshire. Emva kwendlu entle yeholide eCotswolds? Jonga ezi renti zintle.
Eyona ndlela ilungileyo yokupakisha Imoto -Iindawo eziLula zokuKhulisa iiMoto zokuPakisha iBoot
Pakisha, gcina imithwalo kwaye wenze indawo ethe kratya kwimoto yakho nakwibhuthi yemoto ngaphandle kwengxoxo ngezi ngcebiso zilula zokupakisha, zilungile ukuba uyahlala, uhambo lwendlela, uhambo lwenkampu okanye iholide phesheya.
Uninzi lweeNdlu zokuhlambela eziHleze uMhlaba
Sijonga ezinye zeendawo zokuhlambela zehotele ezinomtsalane kwihlabathi liphela, ukusuka kwizitayile zokuvuthuza eMaldives, ukuya eKenya naseParis.
Izindlu ezikwiIdyllic yaseSicilian Idolophu yaseSambuca Zithengiswa ngee- € 1 nje
Idolophu encinci encotsheni yenduli yaseSambuca, kwisiqithi sase-Italiya iSicily, ngoku ithengisa iipropathi ngexabiso le-1. Ifumaneka kwiphondo lentaba iAgrigento, idolophu ibeke izindlu ezininzi ukuze zithengiswe ngaphandle kwento ukuze kutsalwe abahlali abatsha.
Iindlela ezizezinye ze-Airbnb 2021 | Iindawo ezifana ne-Airbnb e-UK
Khangela ezinye zeAirbnb ezizezinye ezifanelekileyo zeKhefu lase-UK. Ukuba awukwazi ukufumana ukufumaneka kwehlobo lowama-2021, jonga ezi ndawo zokuqeshisa ngeholide.
Iinqaba ezi-6 zakudala zokundwendwela iYurophu ngeHalloween
IHalloween ikufutshane nekona, kutheni ungabhiyozeli ixesha elingenaxhala kunye nokuhlala kwezinye zeenqaba ezothusayo zaseYurophu.
Iindawo ezi-18 eziMibalabala ezijikeleze uMhlaba jikelele-iiNdawo eziBalaseleyo zeHolide
Ukusuka kude eBotswana ukuya kufutshane nekhaya lase-Italiya, awona mazwe anemibala eqaqambileyo abonakalisiwe kwisifundo esitsha yiNkampani yeTravel yeNkampani ebonelela ngeholide kubo bonke.
I-10 yeentsomi zeNtsomi zaseJamani -Iifoto
Ukutyelela iinqaba ezilungileyo eJamani ezixakeke kwimbali. Lixabise eli lizwe ngokwakha okumangalisayo ngokujonga ezi nqaba zentsomi zili-10-kwaye uziphawule kuluhlu lwamabhakethi akho kwixesha elizayo xa undwendwela iJamani.
Ukubalekela eChateau: I-DIY ibangela umdla kwiFrench chateau
I-Channel 4's Escape to the Chateau: I-DIY ibangele ukwanda okumangalisayo eBrits ejonge ukufudukela kwelinye ilizwe ukuze ityale imali kwivenkile yabo yaseFrance. Uthotho lwe-spin-off lubona uDick Strawbridge kunye nenkosikazi yakhe u-Angel bencedisa iBrits eqhuba ichateau eFrance.
ILacoste: Ilali yamaXesha aPhakathi egcinwe ngokungenasiphoso eProvence, eFrance-SCAD Lacoste
Fumanisa ukuba kutheni iLacoste, ilali yamaxesha aphakathi egcinwe ePetit Luberon kwingingqi yeProvence-Alpes-Côte d'Azur kumazantsi eFrance, kunye nekhaya lekhampasi ye-SCAD Lacoste, iphuhlise igama njengendawo yamagcisa.
Igadi Yemimangaliso yaseDubai: Ukhenketho olululo lweGadi yeentyatyambo eyaziwayo
IGarden Miracle yaseDubai sisitiya esikhulu seentyatyambo sendalo esenziwe ngaphezulu kwe-150 yezigidi zeentyatyambo, ezibekwe kwisithili saseDubailand eDubai, e-United Arab Emirates.
Ilizwe laseBurrow eWales Ngaba yindawo yokuhlala yase-UK egqibeleleyo
Ngaba ujonge izimvo zeeholide zehlobo? Kutheni ungayi kwiPowys eWales ukuya eBurrow ngokuhlala okumnandi e-UK.
Uyibona njani iMali yomgunyathi ngeholide-Khangela iMali yamanye amazwe
Chonga imali yokwenyani yobuxoki kwaye ube yingcali ekufumaneni imali yomgunyathi kwiimali ezahlukileyo ngesi sikhokelo kwi-International Currency Exchange (ICE).
Ngaphakathi Ihotele enkulu yaseScotland Yard eLondon
Ihotele eNkulu yaseScotland Yard eyi- $ 110 yezigidi, eyakuba yindawo ekuyo iScotland Yard Metropolitan Police HQ kunye neeofisi kamva ze-Ofisi yoMphathiswa Wezokhuselo, ihlawuliswa 'njengeyona hotele zineenkwenkwezi ezi-5 zakha zakhiwa eLondon'.
Iindawo ezi-7 zokuhlala kwiSithili seLake -Ukuhlala e-UK
UKate Middleton kunye neNkosana uWilliam, iDuke kunye neeDuchess zaseCambridge, bandwendwele iSithili seLake kuhambo lwabo lwamva nje. Siyajikeleza apho sihlala khona kwiLake District.
I-Airbnb -amakhaya ali-13 athandwa kakhulu eYurophu
Awona makhaya ahlala efumaneka kuluhlu lwezixhobo ze-Airbnb ezivela kwilizwekazi liphela
Hlala kwisiQithi seIreland esikude kude kube simahla, Unikezo lomsebenzi omtsha
Isiqithi esikude saseIreland iGreat Blasket, emi kwindawo ekuphoswa kuyo ilitye eliselunxwemeni lweCount Kerry eIreland, ijonge esi sibini ukuba sifuduke kangangeenyanga ezisixhenxe.
Ezili-10 zeNdawo eziMnandi kunazo zonke zeHlabathi zokuHlala ngo-2018-Iiholide zika-2018
Nokuba ujonge ukuya kwikhefu elincinci leholide okanye ukonwabela ixesha lokuhamba, fumana ugqozi ngeeholide ezilungileyo zika-2018 ngophando olutsha olubize iNew York njengeyona ndawo ipholileyo yeholide ka-2018.
I-Airbnb Irhoxisa uKhuphiswano oluKhulu lweTshayina lokulala
I-Airbnb ilukhuphile ukhuphiswano olukhethekileyo oluza kunika abaphumeleleyo abane ngethamsanqa ithuba lokuhlala kuDonga oluKhulu lwase China kwikhaya eliyilelwe ngokwesiqhelo.
iibhedi ezipholileyo zamantombazana akwishumi elivisayo
Amacebo ombala wegumbi lokulala ongwevu